रूस को सुनौलो रिङ एक यात्रा मा जा रहेको छ, र विचार तपाईं Yaroslavl मा देख्न सक्नुहुन्छ कि? या शायद तपाईं यस शहर मा एक लामो समय बाँच्न र पैदल यात्रा लागि नयाँ मार्गहरू लागि देख रहे हो? पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl) - विगतमा शहर को सबै भन्दा प्रसिद्ध ठाउँहरू मध्ये एक, एक धनी तीन शताब्दीका इतिहास छ। किन यो एक यात्रा लायक तल पढ्ने छ।
पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl), जो तल वर्णन गरिनेछ कसरी प्राप्त गर्न - मात्र होइन सहरमा तर रूस सम्पूर्ण मा पुरानो एउटा। तर Yaroslavl को केही बासिन्दा यसको बारेमा थाहा र यसको इतिहास रुचि राख्नुहुन्छ। तर पार्क को अस्तित्व को केही क्षण सुविधा वा वृत्तचित्र फिलिमहरु लागि एक महान कथा हुन सक्छ। तर पहिलो कुरा पहिले।
पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl को शहर) फिर्ता 1720-1730-एँ गर्न तिथिहरु। यो तथाकथित क्यानभास मामला Yaroslavl ठूलो कारखाना सिर्जना नेदरल्यान्ड सिकेको थियो जो Tsar पत्रुस म Zatrapeznovym व्यापारी इवान, अन्तर्गत यस समयमा थियो। एक Manor छ जो पनि घर र आवासीय छ जो आफ्नो स्रोत, मा - को क्रीक Kavardakovskogo मुख, कपडा मा - कागज: यो तीन सेट समावेश जो रूस संयुक्त, मा सबै भन्दा ठूलो कारखाना थियो।
कारखाना निर्माण समयमा, यो पानी र को संचालन को लागि धारा प्रवाह संग ponds एक क्यासकेड बनाउन निर्णय भएको थियो वायुघट्टहरू। Ponds पाँच "फोहोर" थिए - र लाँड्री कुल्ला, "सफा", पानी स्रोतको रूपमा सेवा जो, प्रभु र अन्तिम, पाँचौ तालाब को तालिका माछा मार्ने लागि दुई ponds, सबै भन्दा सुन्दर थियो, यो हवेली को कारखाना मालिक सही अर्को छ, र पनि प्रयोग स्नान सज्जनहरु - त्यहाँ पुरुष र महिला kupelni गरेका थिए।
लक्जरी नियमित पार्क को एक बिट पछि बनाइएको थियो। को बारोकी शैलीमा छवि आधारित मनपर्ने पत्रुस म डच उद्यान लागि आनंद से शाही personages विस्मित लगियो। Yaroslavl मा पत्रुस र पावल पार्क को इतिहास यो विचार सफल थियो सुझाव - यो धेरै उच्च र्याङ्किङ्ग मानिसहरूको मनपर्ने ठाउँ थियो।
बगैंचामा प्रत्येक अन्य मा लेखिएको छ कि ट्रयाक दुई वर्गहरूको समावेश छ। बीचमा विभिन्न दिशामा रेज को रूप मा उहाँबाट मंडप स्थित थियो मा आठ ट्रयाक थिए। गहने को बाटो को चौराहे मा पार्क रूपमा छोट्याउन shrubs, फोहराहरू र मूर्तिहरू trellises थिए। पानी फोहराहरू हावा बाट चल्ने घट्रट प्रयोग इंजेक्शन।
रोचक तथ्य: द पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl) अक्सर सेन्ट पीटर्सबर्ग मा ग्रीष्मकालीन गार्डन तुलना गरिएको छ, र गजेबो "कुटिया" बीचमा भनिन्थ्यो। क्याथरीन दोस्रो आफु उसलाई आफ्नो अस्थायी निवास निर्वाचित र यहाँ receptions संगठित।
पत्रुस र पावल चर्च
पार्क को मुख्य तत्व एक सानो पछि निर्मित चर्च थियो। निर्माण 1742-औं वर्ष सम्म 1736 देखि गरियो। मन्दिरको वास्तुकला Petrine बारोक मा पूरा भएको थियो। हामी को छवि आधारमा लिए पत्रुस र पावल गिरजाघर उत्तरी राजधानी, त्यसैले सेन्ट पीटर्सबर्ग संग समानता पनि अधिक हडताली थियो।
पार्क मा पत्रुस र पावल चर्च (Yaroslavl) - को वास्तुकला को मात्र स्मारक "पत्रुसको बारोक" यस शहर मा। कुनै एक जसले उनको परियोजना संग आए थाह, तर मन्दिरमा धेरै सुन्दर छ: अग्लो एसपायर, भवन, नीलो र सेतो रंग, धनी सजावट को लम्बी माथिल्लो भाग ... भित्र त्यहाँ जाडो चर्च छ - यो भूमि तल मा स्थित छ, र गर्मी - दोस्रो।
चर्च को मुख्य मात्रा मधुर स्वर चर्च सत्तरी मिटर उचाइ छ भनेर, सोपानकृत घण्टी टावर मिश्रित। मन्दिरमा लामो जीवित र Krasnoperekopskiy क्षेत्र र यसको वरपर काम मान्छे को लागि एक आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा सेवा छ।
को 19 औं शताब्दीमा पेट्रोपाभ्लोस्क पार्क
यसको परिसर सबै संविधान संग 19 औं सताब्दी Yaroslavl कारखाना को दोस्रो आधा मालिक र Karzinkin Igumnov द्वारा किनेको थियो। पुरानो कारखाना भवन पछि नयाँ भवन निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ जो पत्थर र ईटाहरु, मा पोख्त।
समय, पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl), जो तल हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो, को परिदृश्य र नियमित योजना को सुविधाहरू भन्दा गुमाउन मा लिन थाले। दुई-मंजिल्ला भवन almshouses तिनीहरूले कारखाना को आश्रय पुरानो कार्यकर्ता पाउन सक्छ जहाँ मन्दिर, अर्को निर्माण गरेका थिए।
20 औं शताब्दीमा पार्क - यसको पूर्व महानता को हानि
यस शताब्दीमा बगैचा परिवारको सुरुमा एक गर्मी निवास रूपमा, आफ्नो नयाँ मालिक, ए एफ Gryaznova प्रयोग, र यो मात्र मालिक आफूलाई वा आफ्नो अतिथि आराम गर्न सकेन। जब पवित्र इस्टर celebrates मा दिन - मजदुर एक वर्ष एक पटक यहाँ आउन सक्छ।
1918 मा, Yaroslavl ठूलो कारखाना nationalized थियो। पछि, 1929 मा, पत्रुस र पावल चर्च र बन्द भएको थियो, र क्लब को अग्रगामी यसको निर्माण मा स्थित छ। जब चर्च बन्द brutally आफ्नो Abbot माइकल Nevsky, शहर मा प्रसिद्ध पुजारी मारिए।
सोभियत समयमा, सेन्ट पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl) को "संस्कृति को पार्क र 16 औं कांग्रेस पछि नाम आराम" पुन: नामाकरण भयो र सार्वजनिक भयो। को अधिकारीहरु पार्क टुकडी पूर्व नियमित लेआउट फर्कन खोजे तर आफ्नो योजना यसको मूल ऐतिहासिक उपस्थिति पुनर्स्थापना थियो थिएन।
1986 1991 साल देखि, यो कला, बगैचा र पार्क व्यवस्थापन र restravratsionnogo मामला को क्षेत्रहरू देखि चिरपरिचित विशेषज्ञहरु उपस्थित थियो जो छलफलमा, पुनर्स्थापना को मस्यौदा सेट विकास गरे। तिनीहरूमध्ये Dmitriy Sergeevich Lihachev, शिक्षाविद्, philological विज्ञान को डाक्टर, र विश्व-प्रसिद्ध कला थियो। पुनर्स्थापना परियोजना किनभने वास्तविक जीवनमा कार्यान्वयन फेला गर्नुभयो आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको समयमा फैलन को तयार भएको थियो र स्वीकृत, तर दुर्भाग्य।
मन्दिरमा बारेमा शहरी दन्त्यकथा
त्यहाँ पार्क मा एसएस पत्रुस र पावलको चर्च को अस्तित्व संग सम्बन्धित दन्त्यकथा, Yaroslavl वसोवास गर्न ज्ञात को धेरै छन्। पहिलो, तिनीहरूले चर्च भित्र frescoes मात्र क्रान्तिको माथि यो ठाउँमा, तेल सबै चर्च मा भित्ति चित्र चमक गर्न आदेश दिंदा यस्तो थिएन भन्ने तथ्यलाई धन्यवाद बाँचे भन्छन्। तसर्थ, तिनीहरू केवल तिनीहरूलाई सजिलै रिकभर गर्न पछि मदत जो whitewash, ढाकिएको।
साथै, त्यहाँ frescoes एक पटक स्पष्ट whitewash eclipsed कि दावी कि स्रोतहरू छन्। यो त पर्खाल फेरि सेतो भयो, चालीस कुनै अधिक मिनेट लामो थियो। दृश्य एक वैज्ञानिक बिन्दु, यस घटना तापमान र चिस्यान मा तेज गिरावट द्वारा बताए छ। तर विश्वासीहरूले ईश्वरीय साइन यो घटना देखे।
साथै, त्यहाँ पहिले नै उल्लेख इवान Zatrapeznov, मन्दिरको संस्थापक, यसको पूरा अघि मृत्यु र जाडो चर्च स्थित थियो जो व्यापारी, को चिहान मा गाडे कि एक पौराणिक कथा छ। पछि, संग स्लैब आफ्नो गम्भीर को गुमाए, र त्यहाँ, सँगै प्रतीक संग, क्रान्ति, को ponds को एक को तल स्थित छ पछि डुबेर मर्छन् कि संस्करणहरु छन्।
र अर्को कहानी, जो धेरै अनुयायीहरूले द्वारा विश्वास गरिन्छ। यो "bloodstains" को पौराणिक कथा छ। यो केवल वृद्धि - तिनीहरूले मन्दिरमा भित्र, फर्श बीच, त्यहाँ ल्याउन सफल भएन जो रातो स्थान छ भन्छन्। Mihaila Nevskogo - यो ठाउँमा चर्च को अन्तिम rector हत्या कि विश्वास छ। सबै समय मा उहाँको स्मृति रातो स्थलहरू मोमबत्ती जल।
अब पत्रुस र पावल पार्क
हाम्रो समय मा, आफ्नो काम कारखाना भवन जारी यसलाई अब नाम "लाल Perekop" अन्तर्गत प्राविधिक कपडे को कारखाना छ। जहाँ स्थान एक पटक एक औद्योगिक जटिल थियो सम्पूर्ण क्षेत्र, भग्नावशेष छ। बाँकी के देख एक समयमा यो कपडा, कागज, र jacquard को उत्पादन को लागि रूस सबैभन्दा ठूलो कारखाना बसा भनेर विश्वास गर्न कठिन छ। पूर्व कारखाना भवन पुनर्निर्माण अन्तर्गत हाल छ।
मन्दिर हामीलाई यसको मूल रूप मा छैन तल आउनुहोस्। कुनै आधा गति सिढी बाहिर दोस्रो तल्ला मा बालकनी सम्म अग्रणी, छत को पूर्वी भाग crowns कुनै cupola छ। तर महानता र शहर कुनै analogues छ जो भवन अतुलनीय वास्तुकला, को अटूट आत्मा थिए।
पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl) बलियो उजाड अहिले छ, तर यसको आकर्षण हराएको छैन। अधिकारीहरूले चाँडै भने प्राचीन को टुकडी फर्कन प्रतिज्ञा, तर कम से कम यो एक सभ्य दृश्य छ। तर अहिले यो ठाउँ प्राचीन सांस्कृतिक स्मारक को अद्वितीय वातावरण संग विभिन्न शहर र पनि देशका पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ।
पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl): त्यहाँ कसरी प्राप्त वा हिंड्न?
जहाँ यो स्थान छ Yaroslavl को केही बासिन्दा, र अन्य सहर बाट पनि थप पर्यटक थाह छ। वास्तवमा, तिनीहरू, एउटा अचम्मको श्रृंखला भन्न रूपमा। तपाईं पत्रुस र पावलको पार्क (Yaroslavl) को रूपमा यस्तो ठाउँमा प्राप्त गर्न धेरै प्रयास नगर्नुहोस्। Krasnoperekopsky जिल्ला, सडक Zelentsovskaya, 25 निर्माण: निम्नानुसार उहाँलाई ठेगाना।
बस नम्बर3गरेर प्राप्त वा Vspolinskoe क्षेत्र मार्फत हिँड्नुहोस्, त्यसपछि पुल पार र Komsomolskaya वर्ग मार्फत जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ वर्ग बाट देख्न सकिने छ जो पत्रुस र पावल चर्च को एसपायर, ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। बाट Komsomolskaya वर्ग दस मिनेट हिंड्न पार्क गर्न।
सञ्चालनको पार्क मोड: सोमवार आइतबार, आठ बिहान देखि साँझ पाँच बजे सम्म। कहिलेकाहीं तालिका फरक हुन सक्छ।
पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl): ती देखि प्रशंसापत्र यहाँ गरिएको छ जो
तिनीहरूले भन्न रूपमा, स्वाद र त्यहाँ comrades को रंग। त्यसैले यहाँ, unambiguous मूल्यांकन हुन सक्दैन। पत्रुस र पावल पार्क (Yaroslavl) पर्यटकहरू मिश्रित समीक्षा हुन्छ। कसैले त्यागेर निशान र dilapidated भवन, एक वरपरको ढाँचा द्वारा horrified छ प्रेरणा। तर सबै पाहुनाहरूको कि यात्रा तपाईंको आफ्नै अनुभव निश्चित लायक सिर्जना गर्न यो स्थान सहमत हुनुहुन्छ। त्यसैले, पेशेवरों, जो यात्री उल्लेख:
पुरानो पार्क टुकडी को ऊर्जा तीन शताब्दीपछि पार्क मार्फत हिड्ने धेरै प्रेरक छ, तपाईं पूर्णतया आफ्नो विचार डुबाउनुहोस् र आराम गर्न सक्छन्।
सुन्दर, लगभग मानिस, रूसी प्रकृति, सबै मौसम सुन्दर द्वारा Untouched।
सेन्ट पीटर्सबर्ग संग समानता - पार्क को पनि रूपमा तुरून्त आवश्यक बहाली लगाया जान सक्छ।
तपाईं बच्चाहरु संग हिंड्न सक्छौं - तिनीहरूले तालाब मा बतख खुवाउन चाहनुहुन्छ।
चर्च - यो अठारौँ शताब्दीको एक अद्वितीय वास्तु स्मारक, यो हेर्न दुवै भित्र र बाहिर बाट, यो कुनै रोचक हुनेछ।
पार्क आगन्तुकहरूलाई गर्ने सूचना जारी नकारात्मक पक्ष पनि छ:
कहिलेकाहीं धेरै फोहोर, छरिएका मलबे कुनै एक बाहिर लिन जाँदै छ।
पूर्व महानता को यो केवल एक pathetic भाग थियो।
depressing नष्ट घरहरू र प्रतिकूल प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्।
पर्यटकहरु आशा छ कि चाँडै पेट्रोपाभ्लोस्क पार्क पुनर्स्थापित हुनेछ, प्रतिक्रिया छोडेर र साँझ हिँड्छ लागि शहर मनोरञ्जन गर्न बासिन्दा र पर्यटकहरू मनपर्ने हुनेछ।
पत्रुस र पावल पार्क - एक धनी इतिहास र अविश्वसनीय वातावरण संग एक अद्वितीय स्थान। धेरै दन्त्यकथा र Yaroslavl मसीहीहरूको आध्यात्मिक घर को वस्तु - Yaroslavl भ्रमण गर्न छनोट गर्ने हरेक यात्री, परिसर हेर्न र चर्च साक्षी, आफ्नो ब्याट्रीहरू Recharge गर्न उपयोगी हुनेछ। कथा स्पर्श धेरै सजिलो छ - सिर्फ एक पैदल लागि यहाँ आउनुहोस्।
क्रास्नोडार सबैभन्दा रोचक संग्रहालय
फ्रान्सेली गायना - यो दुःखी भूत, वर्तमान होनहार
Yevpatoriya, "साना यरूशलेम": फोटो र समीक्षा प्राप्त गर्न कसरी
बाँकी मिन्स्क मा - Zaslavl Reservoir
महल Waldau: कहाँ, फोटो, कसरी प्राप्त गर्न
के घडी रोकियो? साइन एक चिन्ताकारक र भयावह को
व्लादिमीर Barsukov (Coumarin)। को तामबोभ संगठित अपराध समूह को नेता
Multivarka "MOULINEX MK300E30": समीक्षा, निर्देशन, व्यञ्जनहरु, फोटो
VES-दही VES VYM-2 - भान्सा मा एक ठूलो सहायक!
घुमक्कड कैडिलाक star name एस-802: एक सिंहावलोकन, वर्णन, सुविधा र समीक्षा
विधाहरू गीत: विवरण र उदाहरण।
Verkhoyansk र Oymyakon? उत्तरी गोलार्द्ध को चिसो पोल कहाँ छ?
गितार मा नाम तार: कान प्रशिक्षण आधार र मात्र होइन ...